Xidigaha Sergio Ramos, Isco, Kroos, Carvajal Iyo Marcos Llorente Oo Farriin Qiiro Leh Ku Macasalaameeyey Zinedine Zidane – GOOL24.NET
Xidigaha Sergio Ramos, Isco, Kroos, Carvajal Iyo Marcos Llorente Oo Farriin Qiiro Leh Ku Macasalaameeyey Zinedine Zidane
May 31, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Xiddiga Real Madrid ayey naxdin iyo lama filaan ku noqotay in tababarahoodii Zinedine Zidane uu maanta ku dhowaaqay inuu iska casilay shaqada Los Blancos.
Ciyaaryahannada Real Madrid ayaa farriimo qiiro leh u diray tababarahooda shaqada ka tegay, kaddib markii isaga oo uu dhinac fadhiyo madaxweynaha kooxda Florentino Perez uu warbaahinta u sheegay inuu qaatay go’aan uu kaga tegayo shaqada Real Madrid, taas oo uu xusay inay u wanaagsan tahay kooxda, ciyaaryahannada iyo jamaahiirtaba.
Kabtanka Real Madrid Sergio Ramos, ayaa markiiba farriin qiiro leh soo diray, waxaana uu ku sheegay in Zidane uu ahaa saaxiibkii oo shaqo badan, wanaagsan oo uu jecal yahay, waxaanu yidhi: “Tababare, ciyaartoy iyo hadda oo uu yahay tababaraha go’aansaday inuu tago anaga oo halka ugu sarraysa joogna. Waad ku mahadsan tahay labada sannadood ee kubadda cagta, shaqada, jacaylka iyo saaxiibtinimada ahaa. Waad tegaysaa laakiin sumcaddaada ayaa halkan joogaysa oo ah mid ka mid ah cutubyadii ugu guulaha badnaa taariikhda ay leedahay kooxda aynu jecelnahay ee Real Madrid”
Waxa kale oo isaguna farriin maca-salaamayn ah diray xiddiga khadka dhexe ee Isco Alcorcon, waxaanu yidhi: “Tababare, sharaf ayay ii tahay inaan kula shaqeeyey oo aan wax kaa bartay. Inagoo wada shaqaynayna ayeynu wada guuleysanay, waxa aad naga caawisay inaanu gaadhno shay taariikhi ah. Wanaag ayaan kuu rajaynayaa.”
Laacibka da’da yar ee Marcos Llorente oo inta badan kursiga kaydka fadhiyey marka laga reebo dhawr ciyaarood, ayaa waxa uu isaguna yidhi: “Tababare, waxbaad na bartay, na horumarisay, na korisay, waxaananu gaadhnay wax u muuqda inaanay macquul ahayn. Halka ugu sarraysa ayaad nagaga tagtay. Waad mahadsan tahay anigoo ku hadlaya magaca qof kasta oo taageera Real Madrid”
Laacibka khadka dhexe ee xulka qaranka Germany iyo Real Madrid ee Toni Kroos ayaa isaguna yidhi: “Mahadsanid Mudane, sharaf bay ii ahayd inaan kula shaqeeyey.”
Difaada midig ee Real Madrid, Dani Carvajal ayaa isaguna yidhi sidan: “Zidane, waad ku mahadsan tahay labada sannadood iyo badhka aad nala joogtay ee adiga iyo shaqaalahaaguba aad xirfadda cajiibka ah muujiseen. Wax badan ayaan kaa bartay ciyaartoy ahaan iyo shakhsiyanba. Wanaag ayaan kuu rajaynayaa.”
Si kastaba ha ahaatee, is casilaadda Zinedine Zidane ayaa taabatay qof kasta oo ka mid ah jamaahiirta Real Madrid.